Trenbolone Enanthate Powder အကြောင်းအားလုံးအဆိုပါအရာ | AASraw
/ဘ‌‌လော့ခ်/ပြတိုက်/Trenbolone Enanthate Powder အကြောင်းအားလုံးအဆိုပါအရာ
အပေါ် Posted 02 / 20 / 2019 by ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က ရေးသားခဲ့သည် ပြတိုက်.
သင်သည်သင်၏ကာယဗလစစ်အစိုးရကအချို့အစွမ်းထက် steroids ထည့်သွင်းစဉ်းစားနေပါသလား? ကောင်းပြီ, Trenbolone enanthate အမှုန့်ကိုသွားဖို့အတွက်လမ်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ တစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အရေးပါရှုထောင့်မှာကြည့်၎င်း၏အကျိုးခံစားခွင့်, ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်မည်ကဲ့သို့တစ်ဦးဝယ်ယူအောင်ယူပါ။
Trenbolone Enanthate သမိုင်း
အစပိုင်းမှာ Trenbolone အဆိုပါတိုးတက်အောင်များအတွက်ပါးစပ်တိရစ္ဆာန်ဆေးကုသရေးမူးယစ်ဆေးခဲ့သည် ကြွက်သားအကျိုးအမြတ် တိရစ္ဆာန်များအတွက်။ ဒါဟာပထမဦးဆုံးဂျာမန်ကုမ္ပဏီ, Hoechst-Roussel မှတဆင့်လယ်ပိုင်း 60s စဉ်အတွင်းဖြစ်တည်မှုသို့ရောက်ကြ၏။ အဆိုပါထုတ်လုပ်သူဟာသူတို့ရဲ့တိရစ္ဆာန်ဆေးကုသရေးထုတ်ကုန်, Finajet branded ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, Trenbolone enanthate အမှုန့်ကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်မှ Los Angeles မြို့မှာရှိတဲ့သုတေသနတစ်ခုဘာသာရပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဤသည် Tren Ace ကိုဂျာမဏီထုတ်လုပ်မှုနှောင်းပိုင်း 80s အတွက်၎င်း၏ပြတ်တောက်သည်အထိခဏလူကြိုက်များရရှိခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်းတစ်ဦးကစုံတွဲအကြာတွင်ပြင်သစ်တွင်အခြားကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံအမှတ်တံဆိပ်အမည်, Negma အောက်မှာလူ့-တန်း trenbolone hexahydrobenzylcarbonate (Parabolan) နဲ့ဖွင့်လာ၏။ ကံမကောင်းစွာပဲ, ဒီလွန်း 1997 အတွက် illegalized ခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Trenbolone enanthate တစ်ဦးအမှတ်တံဆိပ်တံဆိပ်နှင့်အတူ 2004, trenabol အတွက်လွတ်လပ်သောထုတ်ကုန်အဖြစ်ထင်ရှားကျော်ကြားလာခဲ့သည်ထင်ရှား။ , ဗြိတိသျှနဂါးကုမ္ပဏီတစ်ခုမြေအောက်ဓာတ်ခွဲခန်းထုတ်ကုန်အဖြစ် Steroid တစ်မျိုးထုတ်လုပ်။ ကော်ပိုရေးရှင်း 2006 အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းထဲကထွက်သော်လည်း, အမှတ်တံဆိပ်မှောင်ခိုစျေးကွက်ရှိနေဆဲရရှိနိုင်ပါသည်။
Tren တစ်ဦးကတစ်ဦးဆေးဝါးနှင့် VET တန်းမူးယစ်ဆေး, Tren အီးအဖြစ်နှစ်ဆသွားရမည်အကြောင်းနှင့် Parabolan လူ့အသုံးပြုရန်တင်းကြပ်စွာဖြစ်ကြသည်။
Trenbolone Enanthate Powder ကဘာလဲ?
Trenbolone enanthate CAS အတူဒြပ်ဒြပ်ပေါင်းများအဘယ်သူမျှမ 10161-35-8 ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဟိုနှင့်အန်ဒရိုဂျင်ဝိသေသလက္ခဏာများနှစ်ဦးစလုံးထားပါတယ်တဲ့ကုန်ကြမ်းဖြစ်ပါတယ်။ Tren E ကိုအမှုန့်တစ်C17β enanthate Ester ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့် nandrolone (19-nortestosterone) မှဆင်းသက်လာ။
ရုံ Deca Durabolin ကဲ့သို့ Tren ယင်း၏ 19th အနေအထားမှာကာဗွန်အက်တမ်ကင်းမဲ့။ သို့သော်ဝင်းရဲ့ထူးခြားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဟာ 9th နှင့် 11th ရာထူးမှာနှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးကို double ကာဗွန်နှောင်ကြိုးပါရှိပါတယ်။
အဲဒီမှာရောင်းရန် Trenbolone ၏သုံးမျိုးဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ငါသူတို့ကွာခြားဘယ်လိုရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။ ဤအပေါင်းများကိုတို့တွင်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပိုင်ဆိုင်မှုဓာတုနှင့်ဟော်မုန်း setup ကိုဖြစ်ပါတယ်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့သူတို့ကိုဆိတ်ကွယ်ရာကိုပြောပြထားတဲ့ Ester ၏ပူးတွဲပါပဲ။
Ester ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း Trenbolone ဟော်မုန်းများ၏လွှတ်လှုပ်ရှားမှုထိန်းညှိ။ အကြားတစ်ဦးကမြန်မြန်ဆန်ဆန်နှိုင်းယှဉ် trenbolone acetate နှင့် enanthate Ester အဆုံးစွန်သောရှည်လျားတဲ့ဝက်ဘဝရှိပြီးတဖြည်းဖြည်းယခင်ထက်ပြုမူကြောင်းပြသထားတယ်။ Tren အီးအဘို့, enanthate Ester င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံ၏ 17-beta-ဟိုက်ဒအုပ်စုတစ်စုမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦး Ester ကင်းမဲ့သော်လည်း Trenbolone အခြေစိုက်စခန်း, အခြားမူကွဲဖြစ်ပါတယ်။
Trenbolone enanthate အမှုန့်ရဲ့အဓိကအသုံးပြုမှုကိုဟိုစတီရွိုက်များထုတ်လုပ်၌တည်ရှိ၏။ ဒါဟာယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ပြီးငါးဆပိုမိုအစွမ်းထက် testosterone ဟော်မုန်းထက်။ အမှန်ကတော့, ကသငျသညျ Tren E ကိုသာ 200mg ယူလျှင်, သက်ရောက်မှုနှင့်ရလဒ်များကို testosterone ဟော်မုန်း၏ 1000mg စားသုံးခဲ့သူအခြားအသုံးပြုသူတွေနဲ့ tally မည်ဟုဆိုလိုသည်
ဟို rating 500 100
အန်ဒရိုဂျင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက် 500 100
ထိုသူနှစ်ဦးစတီရွိုက်နီးပါးတူညီသော်လည်း, ခြားနားချက်အာနိသင်နှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များ၏မြန်နှုန်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌လာသည်။ Tren တစ်ဦး၏စုပ်ယူမှုနှင့်မစင်နှုန်းသည်ယင်း၏ဤအရပ်မှအဆွေတော်သည်, တိုတောင်း trenbolone acetate တစ်ဝက်အသက်တာ၏ထက်ပိုမိုလျင်မြန်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်, သင့်ခန္ဓာကိုယ်မိုင်တစ်မှုနှုန်းမှာအပြုသဘော trenbolone enanthate ရလဒ်များကိုမှတ်ပုံတင်လိမ့်မည်။
Tren အီး၏အဓိကအားသာချက်ကအနည်းငယ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိပါတယ်ဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျဆေးထိုးအပ်ဖောက်ရာများအတွက်ပျော့အစက်အပြောက်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုရငျ, သို့ဖြစ်လျှင်ဤသွားကြဖို့လမ်းဖြစ်၏။ Tren Ace ကိုတစ်ရက်-to-နေ့ကအသားဆေးထိုးရန်လိုအပ်ပါသည်စဉ်ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ပုသောက်သုံးသောရုံနှစ်ကြိမ်တစ်ပါတ်ဖြစ်ပါတယ်။
သာမန်ခက်သောအသွေးကိုအဆင့်ဆင့်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသို့မဟုတ်တည်ငြိမ်ရန်တွေ့ပါစေခြင်းငှါကတည်းက Trenbolone enanthate ဝါရင့် steroids ကာယဗလများအတွက်စံပြဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဖြတ်တောက်ခြင်းသံသရာအပေါ်သူတို့အဘို့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
အဘယ်အရာကို Trenbolone Enanthate Powder များအတွက်အသုံးပြုပါသလဲ?
Trenbolone အမှုန့် trenbolone enanthate ဆေးထိုး၏ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဓာတုဒြပ်ပေါင်းများကိုလက်တွေ့အသုံးပြုမှုအဘို့ဖြစ်၏။
Tren အီးဟာကောင်များ၏တိုးမြှင်, ကြွက်သားတည်ဆောက်မှုအတွက် Champ ဖြစ်ပြီး, ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးမြှင့် ကာယဗလ သို့မဟုတ်အားကစားသမား။ ဒီ Steroid တစ်မျိုးနှင့်အတူ, သင်မလိုအပ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အဆီရရှိမှုမရှိဘဲကြွက်သားထုထည်ကိုတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။ အနည်းဆုံးတစ်ခုကိုသင်ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် bulking အဆင့်စဉ်အတွင်းသီးနှံများကိုပုံနိုငျသောအနည်းငယ်မူးယစ်ဆေးဝါးများကြားတွင်ဖြစ်ပါသည်။
တစ်ဦးဒီဇိုင်နာ Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ခြင်းအပြင် Trenbolone E ကိုအမှုန့်သုတေသီများနှင့်ပညာရှင်များသိပ္ပံဆိုင်ရာသုတေသနအတွက်အသုံးပြုသည့်သိသာထင်ရှားသောဒြပ်စင်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာသက်ကြီးရွယ်အိုလူနာအကြားကြွက်သားအရှုံးဖြေရှင်းနိုင်သည့်မူးယစ်ဆေးဝါး, deriving အထူးသဖြင့်အခါ, အချို့လက်တွေ့တန်ဖိုးများရှိပါတယ်။
Trenbolone Enanthate ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ပါသလား
Trenbolone enanthate များ၏စုပ်ယူမှုကိုနှင့်ဇီဝြဖစ်အသည်းထဲမှာပေါ်ပေါက်ပါတယ်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးအထီးအလယ်တန်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများများအတွက်တာဝန်ရှိနေသောအန်ဒရိုဂျင် receptor ဆဲလ်များအတွက်မြင့်မားသောဆှဖှေဲ့ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်အီစထိုဂျင်သို့ aromatize ပါဘူးကတည်းက Steroid တစ်မျိုးကြွက်သားအမြတ်အမှီစေပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင် Tren အီး၏ရှေ့မှောက်တွင်ပရိုတိန်းပေါင်းစပ်အပေါ်ကြွက်သားနှင့်နောက်ဆက်တွဲတိုးတက်မှုအားဖြင့် Ammonium အိုင်းယွန်းများ၏စားသုံးမှုတိုးပွားစေပါသည်။ ယင်းကြွက်သားတစ်ရှူးအလုပ်လုပ်နေသော်လည်း, ဒီ Steroid တစ်မျိုးစာစားချင်စိတ်ကိုလှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့် catabolism သို့မဟုတ်ကြွက်သားများအခြေအနေများနှုန်းလျော့နည်းစေသည်။ အပြင် AR သို့စညျး မှစ. , ဝင်းလည်း lipolysis လွယ်ကူချောမွေ့စေမည့်ဤအရပ်သည်အဆီဆဲလ်ပူးတွဲ။
ကျောက်ကပ်အပေါ်နေစဉ်, Tren ပြုပြင်မွမ်းမံမဆိုပုံစံကိုခံယူခြင်းနှင့်မကဖြိုဖျက်ပါဘူးမထားဘူး။ ဤအကြောင်းကြောင့်, မူးယစ်ဆေးဆီး system ပေါ်တွင်မျှဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ မစင်ဆီးမှတဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။
Trenbolone Enanthate တစ်ဝက် အသက်
ဤသည် trenbolone enanthate 8 ရက် 12 အကြားတစ်ဦးဝက်ဘဝကိုရှိပါတယ်။ ရှည်လျားသော Ester ဖြစ်ခြင်း, Trenbolone Enanthate နှေးစုပ်ယူမှုနှုန်းမှာအတူခန္ဓာကိုယ်အပေါ်တဖြည်းဖြည်းဆောင်ရွက်သည်။ ဒါကြောင့်မစင်မတိုင်မီကာလ၏စုံတွဲတစ်တွဲများအတွက်လူ့စနစ် lingers ။
ဘယ်လို Long ကယ Trenbolone Enanthate သင့်စနစ်မှာတော့နေမှာလား
သငျသညျတခုဟို Steroid တစ်မျိုး၏ဝက်ဘဝတွက်ပါကဒီမူးယစ်ဆေးဝါးစနစ်နေပါလိမ့်မယ်အချိန်ပမာဏကိုခန့်မှန်းရန်မလွယ်ကူဖြစ်လာသည်။ ဤသည်ကြာချိန်ကိုလည်းထောက်လှမ်းအချိန်အဖြစ်လူသိများသည်။
သင်တစ်ဦး Steroid တစ်မျိုးစမ်းသပ်ထုတ်သယ်တဲ့အခါ, Trenbolone Enanthate သင် tren သံသရာထဲကနေငါးလအတွင်းအပြီးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အကြောင်းပြချက်က၎င်း၏ဇီဝြဖစ်တဲ့ခရုရဲ့အရှိန်အဟုန်မှာဖြစ်ပေါ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဒီဒြပ်ပေါင်းများဟာရှည်လျား Ester features နှင့်သွေးကြောထဲမှာနှောင့်နှေးဖို့ထိုးဆေးပံ့ပိုးမှုများကိုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို, အပြင်။
သငျသညျငါးလအကြာတစ်ဦးဆီးစမ်းသပ်မှုယူလျှင်, နမူနာအနုတ်လက္ခဏာဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်သင် tren သံသရာအတွက် stacking ပါလိမ့်မယ်သည်အခြား steroids အဆိုပါထောက်လှမ်းအချိန်ကိုအကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်ဟုစိတ်တွင်ထားသင့်ပါတယ်။ ယခုကဲ့သို့ Trenbolone ၏အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အားကစားသမားဆန့်ကျင်ခြင်းမရှိ doping ကိစ္စတွင်ရှိပါတယ်။
Trenbolone Enanthate ၏အကျိုးကျေးဇူးများဘာတွေလဲ?
ကနေအကျိုးအမြတ်၏လျှို့ဝှက်ချက် ဟို steroids အဆိုပါကြိုတင်ကာကွယ်မှုများအောက်ပါဖွငျ့ဖွစျသညျ။ သငျသညျသံသရာမှ စတင်. ရှေ့တော်၌ထိုအန္တရာယ်များကိုနားလည်ပြီးချိန်မှသင့်၏။ အဆိုပါခံစားရန် trenbolone enanthate အကျိုးကျေးဇူးများကိုတစ်ဦးကယ်လိုရီ-အခမဲ့အစားအသောက်ကိုထိန်းသိမ်းခြင်းစဉ်မှန်မှန်ထွက်အလုပ်လုပ်သေချာပါစေ။
ဤတွင်ရဲ့ tren အပေါ်မျှော်လင့်ထားရန်ကားအဘယ်သို့:
ပရိုတိန်း၏ပေါင်းစပ်အမြဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြွက်သား၏အရွယ်အစားမှအချိုးကျသည်။ ယင်း၏မှုနှုန်းမြင့်မားခြင်း, ပိုပြီးကြွက်သားတွေကိုသင်ထိုညီအစ်ကိုဖွယ်ရှိပါတယ်။ ပိုပြီးင်ကဘာလဲ, ပရိုတိန်းတည်ဆဲတစ်ရှူးကာကွယ်ရန်နှင့်လည်းနာလန်ထူဖြစ်စဉ်များကိုအရှိန်မြှင်။
ကြောင့်ဒီ Steroid တစ်မျိုး၏မြင့်အန်ဒရိုဂျင်ဂုဏ်သတ္တိများဖို့, သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြွက်သားများလျင်မြန်စွာကြီးထွားတုံ့ပြန်ပါလိမ့်မယ်။
Trenbolone ပိုပြီးအာဟာရနှင့်အောက်စီဂျင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသူတို့ကိုနိုင်စွမ်းအောင်, အရှင်, သွေးနီဆဲလ်များ၏အရေအတွက်ကိုမြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်။ အများဆုံးအောက်ဆီဂျင်မြင့်မားသောစွမ်းအင်ကိုအဆင့်ဆင့်မှညီမျှ။
သင်သည်သင်၏ဟဲဗီးဝိတ်ရုတ်သိမ်းပေးရန်ဒါမှမဟုတ်တချို့ပြင်းထန်သောလေ့ကျင့်ခန်းဆောင်ရွက်သကဲ့သို့, သင့်ကိုယ်သင်ထွက်ဝတ်ဆင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ခန္ဓာကိုယ် re-ဝါဒီများကိုစွမ်းအားများနှင့်အမြင့်ဆုံးခံနိုင်ရည်နဲ့လုံအာမခံပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ trenbolone သံသရာအတွင်းသုံးလေးပတ်ရဲ့အဆုံးမှာခွန်အားတစ်ခုတိုးမှတ်ပုံတင်ရန်ရန်သေချာစေပါ။ အဆိုပါအကြောင်းပြချက်မူးယစ်ဆေး, သင့်လုံပိုကောင်းစေပါတယ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအချိန်လျော့နည်းစေနှင့်, ခံနိုင်ရည်တိုးတက်ကောင်းမွန်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ အလေးမအားကစားဧကန်အမှန်ဒီအကျိုးကျေးဇူးအကြောင်းကိုအရူးကိုသွားပါလိမ့်မယ်။
-နိုက်ထရိုဂျင် retention ရစေသော
နိုက်ထရိုဂျင်ကြွက်သားအတွင်းရှိပရိုတိန်းပေါင်းစပ်စတင်ဤအရပ်, ထိန်းသိမ်းထားခြင်းနှင့်ဟိုကိုအားပေးအားမြှောက်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကြွက်သားကြီးထွားမှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ ခန္ဓာကိုယ်ဟိုပြည်နယ်ယူဆအဖြစ်အပြင်, မူးယစ်ဆေး catabolism နှင့်ဆက်စပ်ကြွက်သားများရှုထောင့်ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်။
ကြွက်သားတစ်ရှူးနိုက်ထရိုဂျင်နီးပါး 16% ပါဝင်ပါတယ်။ နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်ဤတန်ဖိုးကိုထိန်းသိမ်းရန်သကဲ့သို့, သငျသညျဟိုဆက်ရှိနေပါလိမ့်မယ်။
Trenbolone Enanthate အီစထိုဂျင်သို့ aromatize မထားတဲ့အနည်းငယ်ဟို steroids တို့တွင်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကွောငျ့, သငျသညျအခါပေါ်တွင်အမျိုးသမီးကဲ့သို့ဝိသေသလက္ခဏာများကိုခံစားရဖို့လျော့နည်းဖွယ်ရှိပါတယ်။
အဘယ်အရာကိုစတီရွိုက်အလွယ်တကူအီစထိုဂျင်သို့ပြောင်းက 19th အနေအထားမှာကာဗွန်အက်တမ်၏ရှေ့မှောက်တွင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ 19-nortestosterone ဒြပ်ပေါင်းများကိုအဘို့, ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကာဗွန်အက်တမ်တွေကိုအစားထိုးသွားပါတယ်။
တစ်ခုတည်းသံသရာ၌, သငျသညျ 20 ပေါင်နီးစပ်သူရရှိနိုငျပါသညျ။ တစ်ချိန်တည်းမှာအပိုခန္ဓာကိုယ်အဆီလည်းမီးလောင်နေစဉ်အတွင်းသူ၏အကျိုးအမြတ်ရေအလေးချိန်ကနေရလဒ်အများဆုံး steroids မတူဘဲ, Tren အီးကြွက်သားကြီးထွားမြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ Steroid တစ်မျိုးဟာအင်ဆူလင်ကဲ့သို့သောစီးပွားရေးတိုးတက်မှုအချက်-1 (IGF-1) အစပျိုးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသည်ပရိုတိန်းဟော်မုန်းကိုခန္ဓာကိုယ်နုပျိုနှင့်ဆဲလ်တွေ, အရွတ်, ကြွက်သားတစ်ရှူး, အရိုးနုနှင့်အရိုးတို့ကိုသက်ဝင်စေဖို့အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
သင်တစ်ဦးဖြတ်တောက်ခြင်းသံသရာပေါ်မှာဆိုရင်လျှင်သင်စုဆောင်းမိလာချင်ပါလိမ့်မယ်ပြီးခဲ့သည့်အရာခန္ဓာကိုယ်အဆီဖြစ်ပါတယ်။ Glucocorticoids ကြွက်သားကြီးထွားဆင်းချိန်နှင့်အလေးချိန်အမြတ်အရှိန်အဟုန်မြှင်။ Trenbolone အီးဟာ cortisol အပေါ်နှိမ့်ချ clamping အားဖြင့်ဆောင်ရွက်သည်။
ကြောင့်သွေးနီဆဲလ်တစ်ခုတိုးဖို့, သင့်ခန္ဓာကိုယ်သင် Steroid တစ်မျိုးအပေါ်ခဲ့ကြသည်မတိုင်မီထိုသို့ပြုကြသည်ကိုဘယ်လိုမတူပဲလောင်တိုင်းအာဟာရတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။ အနည်းဆုံးတော့သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သင်သုံးစွဲပရိုတိန်း, ဗီတာမင်, Fats နှင့်ဘိုဟိုက်ဒရိတ်များပင်အနည်းဆုံးမီလီဂရမ်များအတွက်အကောင့်နိုင်ပါတယ်။
feed ထိရောက်မှုသည်အခြား steroids ထင်ရှားသောသောသိသိသာသာ trenbolone enanthate အကျိုးကျေးဇူးများကိုတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။
Tren အီးနှင့်အတူ, သင်သာတစ်ပါတ်နှစ်ကြိမ်သင့်ရဲ့ကြွက်သားင့လိမ့်မယ်။ ကောင်းပြီ, ဒီအချက်အလက်ကိုအဆိုပါ trypanophobic ယောက်ျားတွေသတင်းကောင်းဖြစ်ပါတယ်။
အများအားဖြင့်, ပါးစပ်ဟို steroids hepatoxicity များအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိပါသည်။ တစ်ခုထိုးဆေးမူးယစ်ဆေးဖြစ်ခြင်း, Trenbolone ယင်း၏ pharmacokinetics စဉ်အတွင်းအသည်းဖြတ်သန်းရှောင်ရှားပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျ tren အပေါ်နေချိန်မှာတချို့အသည်းကိစ္စများရှိသည်ဖို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့လျှင်, သင်အသုံးပြုနေတဲ့ခဲ့ Steroid တစ်မျိုးထပ်အပြစ်တင်သင့်ပါတယ်။
သင်ဖြတ်တောက်ခြင်းသံသရာစဉ်အတွင်း tren အပေါ်မျှော်လင့်ရာ၏မသေချာဆိုရင်, ဒီမှာအခမဲ့အရိပ်အမြွက်ပါပဲ။ Trenabol သင်အပိုအဆီနှင့်ကယ်လိုရီကိုမီးရှို့ကူညီပေးပါမည်။ ပျမ်းမျှအားတွင်, သင်အဆင့်အပြီးသင့်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်၏% 1 နီးစပ်သူဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။
Tren အီးနှင့်အတူ, သငျသညျပြင်းထန်သောဝင်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးပေမယ့်နေဆဲစွမ်းအင်ကိုဆက်လက်ရရှိနိုင်သည်။
ပုံမှန် Trenbolone သံသရာ ရှစ်ပတ်အထိကြာပေမယ့်အဆင့်မြင့်အသုံးပြုသူများအ 12 ရက်သတ္တပတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Trenbolone enanthate ၏ဆုံးအံ့ဖှယျပိုင်ဆိုင်မှုသင်သည်မည်သည့်အခြားအ AAS အတူကသီးနှံများကိုပုံနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ သင်ကဘေးထွက်ဆိုးကျိုး minimize နှင့် Steroid တစ်မျိုး၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ပေးရန် stack လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါဟာရာခိုင်နှုန်းစဉ်အတွင်းခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်သဘာဝ testosterone ဟော်မုန်းဟော်မုန်းဟန်ချက်မျှအောင်ပြုလုပ်ပေးကူညီပေးသည်အတိုင်း Off-ရာသီနှင့်အဆင့်ဖြတ်တောက်အတွက် testosterone ဟော်မုန်းထည့်သွင်းရန်အာမခံပါသည်။ ရေရှည်အသုံးပြုသူများအတွက်, Dianabol သို့မဟုတ် Anadrol တက် totting သင့်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်အပြုသဘောသက်ရောက်မှုရှိပါလိမ့်မယ်။ သို့သျောလညျးကိုသင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးပိုဆိုးလာမည်ကို စိုးရိမ်. , ဤ aromatizable ဒြပ်ပေါင်းများ၏သောက်သုံးသောကန့်သတ်ဖို့သေချာပါစေ။
သင် Tren အီးသံသရာအတွင်း stacking နေတယ်ဆိုရင်, ငါ Primobolan, Masteron နှင့် Halotestin အကြံပြုပါသည်။ Winstrol, testosterone ဟော်မုန်း enanthate အမှုန့်နှင့် Anavar အဆိုပါ bulk သံသရာအတွက် tren နှင့်အတူကောင်းစွာသီးနှံများကိုပုံ။
အဆိုပါ Trenbolone အဆင့်ရဲ့အဆုံးမှာ, သင် post ကိုသံသရာကုသမှု (ရာခိုင်နှုန်း) မှာလာမယ့်လေးပတ်ရည်စူးသင့်၏။ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ပျက်ကွက်မလွှဲမရှောင်, အ testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်ကိုလျှော့ချစိတ်ကျရောဂါကိုချွတ်ဖြစ်နိုင်ဟုနှင့်ပိုမိုဆိုးရွားနေဆဲ, ရှိသမျှကြွက်သားထုထည်ဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်။ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ရာခိုင်နှုန်းဖြည့်စွက်၏အချို့ Nolvadex နှင့် Clomid ဖြစ်ကြသည်။
ဤတွင်သက်ဆိုင်ရာ stack အတူစံ Trenbolone enanthate သံသရာ၏ဥပမာတစ်ခုရှိ၏
ရက်သတ္တပတ် Trenbolone Enanthate testosterone Enanthate Winstrol
1-7 400mg / အပတ်က 750mg / အပတ်က -
8-12 400mg / အပတ်က 750mg / အပတ်က 50mg / eod (သည်အခြားနေ့က)
အဆိုပါ bulk အဆင့်
ရက်သတ္တပတ် Trenbolone Enanthate testosterone Propionate Primobolan
1-10 400mg / အပတ်က 200mg / eod 600mg / အပတ်က
အဆင့်မြင့် bulk Cycle
ရက်သတ္တပတ် Trenbolone Enanthate testosterone Enanthate Anavar Primobolan
1-10 400mg / အပတ်က 1000mg / အပတ်က 90mg / အပတ်က 600mg / အပတ်က
11-12 - 1000mg / အပတ်က 90mg / အပတ်က -
13-14 - - 90mg / အပတ်က -
Post ကို Cycle ကုထုံး
သင် Trenbolone enanthate သံသရာနှင့်အတူမှတဆင့်အနေဖြင့်ထိုခဏခြင်းတွင်အပြီး, တစ်နေ့လျှင် Clomid ၏ 50mg ယူသေချာပါစေ။ သင့်အနေဖြင့်လာမည့် 21 နေ့ရက်ကာလအဘို့ဆေးထိုးနှင့်အတူဆက်လက်သငျ့သညျ။ ဆယ်ရက်များအတွက် Nolvadex ၏ 20mg - တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, 40 စီမံခန့်ခွဲရန်အာမခံပါသည်။
Trenbolone Enanthate သောက်သုံးသော
Trenbolone enanthate ထိုးဆေးပုံစံများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ပျမ်းမျှ Trenbolone enanthate သောက်သုံးသောသင် gluteal သို့မဟုတ်ပေါင်ကြွက်သားဆေးထိုးမှတဆင့်နှစ်ကြိမ်တစ်ပါတ်ယူရရှိပါသည်ရာ 75mg မှ 100mg အကြားတည်ရှိသည်။ ဒီညီမျှခြင်းအပတ်စဉ်ထိုး 150mg မှ 200mg ၏အကွာအဝေးအတွင်းကျရောက်သည်ဟုဆိုလိုသည်။
မသက်ဆိုင်သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်, ဖြတ်တောက် bulking, ဒါမှမဟုတ်အစှမျးသတ်တိရရှိမှုရှိမရှိ၏ 200mg / ရက်သတ္တပတ် - intermediate, သင် 400 အကြားလုပ်နိုင်ပါတယ်။
75 ပေမယ့် - 100mg မှော်အလုပ်လုပ်မည်, အဆင့်မြင့်သုံးစွဲသူများကတစ်ခုတည်းထိုးအတွက် 400mg သလောက်ယူနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့သောက်သုံးသောဒီတန်ဖိုးကိုထက်ကျော်လွန်လျှင်, trenbolone enanthate ရလဒ်များကိုဤလောက၏ထဲကဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့အပေါင်းတို့၏အဆုံးမှာ, သင်ပင်ဆိုးရွားသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်အတူရရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။
Tren E ကိုအမှုန့် မိန်းမနှင့်အသုံးပြုရန်အကြံပြုလိုတယ်မဟုတ်ပါဘူး။ အကြောင်းပြချက်ကဒီမူးယစ်ဆေးဝါးအမျိုးသမီးဟော်မုန်းဟန်ချက်နှင့်အတူကောင်းစွာ augur မပြုစေခြင်းငှါအရာအစွန်းရောက်အန်ဒရိုဂျင်ဂုဏ်သတ္တိများ, ထားပါတယ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဥပမာ, ကိုယူ; virilization ထိုကဲ့သို့သော elongated အစေ့အဖြစ်ဆိုင်းဘုတ်များနှင့်အတူဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
ဒါဟာမူးယစ်ဆေးအရင်ကဆိုရင်နှင့်အလယ်အလတ် Steroid တစ်မျိုးအသုံးပြုသူများအတွက်အစွမ်းထက်သည်။ testosterone ဟော်မုန်းထက်ဟိုငါးကြိမ်ဖြစ်ခြင်း, Trenbolone ခက်ခဲ-Core ကာယဗလများအတွက်စံပြဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျကိုစတင်ဖွင့်လျှင်, သင်ကနေခြွင်းချက်အပေးအယူအဘို့အထွက်စစ်ဆေးသင့် Aasraw trenbolone acetate အမှုန့်ပေးသွင်း။
Trenbolone Enanthate ဘေးထွက်သက်ရောက်မှု
စတီရွိုက်ကာယဗလ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနည်းငယ်အချက်များပေါ်တွင်မူတည်ဖြစ်ကြသည်။ ဥပမာ, သောက်သုံးသောမြင့်, ပိုမိုကျရောက်နေတဲ့သင့်ခန္ဓာကိုယ်လက္ခဏာများရန်ဖြစ်ပါသည်။ အပြင်ကလူကွဲပြားခြားနားပါသည်။ တယောက်သောသူရဲ့အသားကိုသင်သိအခြားတဦးတည်းရဲ့အဆိပ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။
ဆီးကျိတ်ပျတိုး (ညင်သာပျော့ပျောင်းဆီးကျိတ် hyperplasia)
prolactin ကြောင့် gynecomastia ၏အန္တရာယ်များ
ဘယ်လိုရှောင်ကြဉ်ရန် Trenbolone Enanthate ဘေးထွက်သက်ရောက်မှု
အထက်ပါ trenbolone ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအချို့မှာအတော်လေးစီမံခန့်ခွဲဖြစ်ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ယူ. , သင်ထိုကဲ့သို့သောဝက်ခြံသို့မဟုတ်အထီးပုံစံဆံပင်ကိုရိတ်အဖြစ်အန်ဒရိုဂျင်ဝိသေသလက္ခဏာများမှမျိုးရိုးဗီဇကျရောက်နေတဲ့လျှင်, သင်ပြန် Steroid တစ်မျိုးယူပြီးထံမှကိုင်သင့်ပါတယ်။
သငျသညျပွငျးထနျချွေးတွေ့ကြုံခံစားလာတဲ့အခါဓါတ်ကိုပြန်လည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ရေများများသောက်ရန်အာမခံပါသည်။ အဆိုပါ tren သံသရာ၏အဆုံးမှာတစ်ဦးရှိသည်ဖို့သေချာအောင် ရာခိုင်နှုန်း ကန်ဖို့ testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုစတင်ပါ။
ပိုပြီးယူ-နေအိမ်အမှတ်တွင်, testosterone ဟော်မုန်းသင့်ရဲ့ stack ၏တစိတ်တပိုင်းနှင့်ကှကျဖြစ်သင့်၏။ အဆိုပါအကြောင်းပြချက် Trenbolone နှုန်း se testosterone ဟော်မုန်း၏သဘာဝထုတ်လုပ်မှုနှိပ်ကွပ်တက်အဆုံးသတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ငါကာယဗလများအတွက် steroids ဘယ်မှာဝယ်လို့ရပါသလဲ?
သငျသညျကာယဗလအတွက်အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောဆိုလျှင်အခွင့်အလမ်းတွေကို, သင့်ပထမဦးဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုကို "သူတို့ကတရားမဝင်င်သောအခါငါကာယဗလများအတွက် steroids ဝယ်နိုင်ဘယ်မှာရှိသနည်း" ကဲ့သို့သွား၏နေကြသည်
အသက်ပြင်းပြင်းရှူ ယူ. ကျနော်တို့ကစကားဝှအက်င့်နေသောကြောင့်ရှေ့ဆက်ဖတ်ပါ။
-Trenbolone Enanthate ဝယ်ယူ
အများဆုံးပြည်နယ်များတွင်ရောင်းချရန် Trenbolone နှင့်၎င်း၏အနကျအဓိပ်ပါယျတရားမဝင်ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ Steroid တစ်မျိုးများထုတ်လုပ်နှင့်ဝယ်ယူခြင်းမရှိတော့နှစ်ဦးစလုံးတိရစ္ဆာန်ဆေးကုသရေးနှင့်လက်တွေ့အသုံးပြုမှုများအတွက်သက်ဆိုင်ဖြစ်ကြသည်။ သင်သည်သင်၏ Steroid တစ်မျိုးကာယဗလစစ်အစိုးရအဘို့အခြို့သောအမိန့်လိုလျှင်ထိုအကြောင်းကြောင့်, သင်၏အသုံးပြုမှုကိုအောင်ရရှိပါသည် မှောင်ခိုဈေးကွက်.
US မှာဥပမာ, FDA ကထုတ်လုပ်မှု, အသုံးပြုခြင်းနှင့် tren ၏ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် plug ကိုဆွဲလိုက်ပါတယ်။ ဒီကန့်သတ်ခြင်းမှ, သင်သဘာဝကျကျအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အဘယ်သူမျှမဆေးဝါးကုမ္ပဏီကဒီ Steroid တစ်မျိုးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ FDA ကခွင့်ပြုချက်ရှိတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျဥပဒေရေးရာသွင်းကုန်လုပ်ရှိပါကသို့သော်, စစ်မှန်သောတိရိစ္ဆာန်ဆရာသို့မဟုတ်တစ်သိပ္ပံနည်းကျသုတေသနပညာရှင်ဖြစ်ဖို့သေချာပါစေ။
Tren E ကိုအမေရိကန်, ဗြိတိန်, သြစတြေးလျနှင့်ကနေဒါတရားမဝင်ဖြစ်သော်လည်း, အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်အာဖရိကအတွက်အများဆုံးနိုင်ငံများက၎င်း၏အသုံးပြုမှုကိုထိန်းညှိအပေါ်တစ်ဦးသူကပြောတယ်ပေးထားကြပြီမဟုတ်။ ကနေဒါကထိန်းချုပ်ထားပစ္စည်းအက်ဥပဒေအောက်မှာဇယား IV မူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကအခွင့်အလမ်းအားသာချက်ကိုယူပြီး www.aasraw.com တူသော trenbolone acetate အမှုန့်ပေးသွင်းရှာလို့ရပါတယ်.
အခြားနှစ်ဦးကို trenbolone မျိုးကွဲမတူဘဲ, Tren E ကိုရှာတွေ့မှအတော်လေးခဲယဉ်းသည်။ သို့သျောလညျးသငျသညျတခုအင်တာနက်-based ကုမ္ပဏီအတွက်ရွေးချယ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဒေသဆိုင်ရာအားကစားရုံကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းထံမှ Steroid တစ်မျိုး source နိုင်ပါတယ်။ တစ်ခုခုကိုလမ်း, သငျသညျအတုနှင့်အ unsterilized ထုတ်ကုန်များ၏လုယူရာဥစ္စာဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်ကြမည်ကို စိုးရိမ်. သူတို့ရဲ့မူရင်းစမ်းသပ်ဖို့သေချာပါစေ။
-Trenbolone Enanthate စျေး
Trenbolone enanthate စျေးနှုန်းအများအပြားအချက်များပေါ်တွင်မူတည်ပါသည်။ ဥပမာ, ဒေသခံတစ်ဦးအားကစားရုံပေးသွင်းသူထံမှဝယ်ယူထားတဲ့အွန်လိုင်းစတိုးမှတိုက်ရိုက်ဝယ်ယူခြင်းထက်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စျေးကြီးရှိနိုင်ပါသည်။ အပြင်, တစ်ဦးချင်းစီထုတ်လုပ်သူဟာသူတို့ရဲ့စျေးနှုန်းရှိပါတယ်။
ပျမ်းမျှစကေးတွင်, Tren E ကိုတစ် 10ml ဖလားကိုတစ် 75mg အာရုံစူးစိုက်မှုအဘို့ $ 130 နှင့် $ 200 အကြားကုန်ကျသည်။
-Tren E ကိုအွန်လိုင်း Buy
ရောင်းရန် steroids သည့်တင်းကျပ်သော FDA ကဥပဒေများကြောင့်ကလာရန်ခက်ခဲကြသည်။ သင်တို့သည်ဤကာယဗလ Hack အတွက်အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောနေလျှင်, သင်က high-grade ကို Tren ထုတ်လုပ်ဟုဆိုကာအပေါငျးတို့သမြေအောက်ဓာတ်ခွဲခန်းများယုံကြည်စိတ်ချဘယ်တော့မှမသငျ့သညျ။ သငျသညျအခြို့သောသုညအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုနှင့်မျှမစည်းမျဉ်းများနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ဒြပ်ပေါင်းများထုတ်လုပ်ကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်အသက်တာအန္တာရာယ်မှမလိုချင်ကြဘူး။
"ငါသည်ကာယဗလများအတွက် steroids ဝယ်နိုင်ဘယ်မှာရှိသနည်း" သင်၏စိတ်တွင်နောက်မေးခွန်းတစ်ခုပြီးတော့ဖြစ်သင့်, ကောင်းပြီ, ငါရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အချိန်နှင့်ပိုက်ဆံနှစ်ဦးစလုံးကယ်တင်တော်မူ၏ကတည်းကအွန်လိုင်းမှဆိုင်အဆင်ပြေပါတယ်။
ကွဲပြားခြားနားသောရောင်းသူအကြား Trenbolone enanthate စျေးနှုန်းတွေကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့သေချာပါစေ, အထောက်ပံ့မယ့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်စစ်ဆေးလျက်, တင်ပို့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်။ အပြင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒီအချက်အလက်ကိုအကျိုးကျေးဇူးများ, trenbolone ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး, ထိုသောက်သုံးသောနှင့်ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုစီမံခန့်ခွဲရန်လည်းပါဝင်သည် Tren အီးအကြောင်းကိုပြည့်စုံအချက်အလက်များ၏အပိုင်းအစပေးသင့်ပါတယ်။
Trenbolone Enanthate ဟင်းချက်ကြော်
သင်တစ်ဦးအဆင်သင့်-to-Injection ထုတ်ကုန်ဝယ်နိုင်ပေမယ့်, သင်ဆဲကုန်ကြမ်း Tren E ကိုအမှုန့်ဝယ်ယူနှင့်သင့်လိုချင်သောစာရွက်အတူတက်လာနိုင်ပါတယ်။ ဤနည်းလမ်းကိုတတ်နိုင်ဒါပေမယ့်လည်းသင့်ရဲ့ Trenbolone enanthate သောက်သုံးသောစိတ်ကြိုက်၏အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းသာဖြစ်ပါတယ်။
Trenbolone enanthate စာရွက်:
100mg / ml မှာ 100ml, သင်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်;
Trenbolone E ကိုအမှုန့်များ၏ 10g (7.5ml)
Benzyl Benzoate ၏ 10ml (10%)
benzyl အရက်၏ 2ml (2%)
grapeseed, နှမ်း, ဒါမှမဟုတ်အုန်းသီးဆီ 80.5ml
100mg / ml မှာ 200ml, သင်လိုအပ်;
Trenbolone E ကိုအမှုန့်များ၏ 20g (15ml)
Benzyl Benzoate ၏ 15ml (15%)
ဆီ 68ml (နှမ်း, grapeseed, ဒါမှမဟုတ်အုန်းသီးရေနံ)
Trenbolone Enanthate အနည်းငယ်အစွမ်းထက်တို့တွင် ရောင်းရန်ဟို steroids အဆိုပါကာယဗလစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်။ က testosterone ဟော်မုန်းထက်ငါးဆပိုမိုအားကောင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမူးယစ်ဆေးအမျိုးသမီးတစ်ဦးမျှမ-သွားလာရင်း-ဇုန်ကြောင်းဆိုလိုသည်။ သင်တစ်ဦးအတွေ့အကြုံရ Steroid တစ်မျိုးအသုံးပြုသူဆိုရင်အကောင်းဆုံးကတော့, သာယူပါ။
ဒါကြောင့်တစ်ဦးတိုးချဲ့ဝက်ဘဝရှိကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း, ရှည်လျားသောသံသရာအဘို့အသွားသည့်အခါအသုံးပြုသေချာပါစေ။ အကြီးမြတ်ဆုံးအရာကိုသင်ကွဲပြားခြားနားသောရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်ဆိုဟို Steroid တစ်မျိုးနဲ့တွဲပြီးအသုံးပွုနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ သငျသညျအစှမျးသတ်တိအမြောက်အများဖွင့်, ဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ပေါ်ဖြတ်ရရှိချင်; Tren E ကိုပြုလိမ့်မည်။
Trenbolone E ကိုအမှုန့်ကို "ကြမ်းတမ်း" ဟို Steroid တစ်မျိုးအဖြစ်လာတာပါသင်သည်အဘယ်ကြောင့်အံ့သြနေပါသလား? ဝင်းတစ်ခုတိုးချဲ့ဝက်ဘဝရှိပြီးဖျက်သိမ်းရေးရှေ့တော်၌ရှည်လျားသောကြာချိန်များအတွက်စနစ်နေဖို့လို့ကောင်းပြီ, ဒါကြောင့်ပါပဲ။ အချို့အပျက်သဘောဆောင်သောကိစ္စရပ်များအားပေါ်ထွန်းတောင်မှသောအခါ, အသုံးပြုသူဆေးထိုးရပ်ဆိုင်းကြောင်းပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်အကျိုးသက်ရောက်မှုနေဆဲလာမည့်နှစ်ပတ်အတွင်းအဘို့အရစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဝီလျံ Llewellyn, Molecular အာဟာရ, ဟို, စာမျက်နှာများ 491 - 499, 618, 724, 2011 ။
Kickman, AT, ဟို Steroid တစ်မျိုး, ဆေးဝါးဗေဒဗြိတိသျှဂျာနယ်, PMC 2439524, အွန်လိုင်း, 2018 ၏ဆေးဝါးဗေဒ။
စသည်တို့နှင့် 17beta-Trenbolone ၏ Vivo အကျိုးသက်ရောက်မှုခုနှစ်တွင် Wilson က VS, Lambright, C တို့, Ostby, ဂျေ, Grey က Jr က LE: တစ် Feedlot Effluent ညစ်ညမ်းမှု, Toxicological သိပ္ပံ, 2002 ။
Yarrow, JF, McCoy, SC, Borst, SE, တစ်ရှူးကို select နှင့် Trenbolone ၏အလားအလာလက်တွေ့အသုံးပြုခြင်း: လျှော့အန်ဒရိုဂျင်နှင့်အီစထိုဂျင်လုပ်ဆောင်ချက်, PubMed ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း, အွန်လိုင်း, 2010 နှင့်အတူတစ်ဦးကအစွမ်းထက်ဟို Steroid တစ်မျိုး။
Ojasoo, Raynaud က။ , receptor လေ့လာရေး, ကင်ဆာသုတေသန 1978 များအတွက်ထူးခြားသော steroids Congeners ။
3585 Views စာ
ဝက်ခြံများအတွက်ကုန်ကြမ်း Isotretinoin (Accutane): Isotretinoin နှင့်အတူဝက်ခြံကုသခြင်း အင်အားအကောင်းဆုံးခံတွင်း steroids Methasterone (Superdrol) Prohormone